लकडाउनले बारीमै कुहियो टमाटर, मलखाडीमा फाल्न बाध्य किसानहरू - Sainokhabar
होमपेज / आर्थिक / लकडाउनले बारीमै कुहियो टमाटर, मलखाडीमा फाल्न बाध्य किसानहरू
लकडाउनले बारीमै कुहियो टमाटर, मलखाडीमा फाल्न बाध्य किसानहरू
साइनो समाचारदाता पथरी/ लकडाउनका कारण यातायात र बजार बन्द भएपछी बारीभरी लटरम्म फलेको टमाटर कुहिन थालेका छन । पोकेका टमटरले बजार नपाए पछि टमटर मलखाडिमा फाल्न बाध्य छन किषानहरु ।
मोरङको पथरीशनिश्चरे वडा नं. ६ महत्व समुदायका कृषकहरुले २ बिघा भन्दा धेरै जमिनमा सब्जी खेति गर्दै आएका छन । रंजित महतोले सामुदायीक खेतिबाट दैनिक ५ कुइटल उत्पादन गदै आएको टमाटर बजार सम्म पुर्याउन नपाउदा मलखाडीमा फाल्नु परेको गुनासो गरेका छन । १ विगाहामा टमाटर खेती गरेको छ । ४ लाख लगानी गरेको टमाटर नबिक्ने भएपछि महतोलाई अहिले ८, ९ लाख घाटा लाग्ने भएको छ । आधा लगानी ऋणमा रहेकाले बजार नपाए मारमा पर्ने महतोले बताउनुभयो ।
प्रति केजि ३० रुपयाँ पर्ने टमटर १२ मा पनि विक्न गाह्रो भएको कृषक सन्जित महतोले बताए । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीहरु बजार संम्म पुर्याउने बेवस्था गरे पुरै नगरलाई धान्ने टमटर हरेको महतो बताउछन । अघिल्लो वर्ष ८÷१० लाखको टमटर बेचेका महतोलाई यो सिजन लगानि उठाउनै गाह्रो भएको छ । गाडी चलाउन नपाएपछि टमाटर बोटमै कुहिन थालेको हो । बुबा बाजे देखि गर्दै आएको तरकारी खेतीबाट महतोको १० जनाको परिवार पालिने गरेको छ ।
बरिमै लिन आउने ब्यापारीहरु पनि यातायात नचलेका कारण आउन सकेका छैन्न भने टिपेको टमाटर समेत बजार लैजान नसकेपछि मलखाडीमा फाल्नुपरेको सर्मिला महतोले बताउनुभयो । बारिबाट जति बिक्छ त्यती नै हो अरु सबै फाल्नु परेको पिडा सर्मिलाको छ । बजार सम्म जाने बातावरण भए लगानि उठने उनि बताउछिन ।
बजारकै समस्या भोगिरहेका सत्य नाराण महतोको पनि टमाटर बारीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । ४, ५ कट्ठामा लगाइएको टमाटरले बजार नपाउदा परिवारपाल्न मुस्किल पर्ने महतोले बताउनुभयो ।
बारीमै टमटर कुहिन थाले पछि किसानले उत्पादन गरेको सब्जी बजार लैजाने वातावरण बनाउन पहल थालेको वडा नं. ६ का अध्यक्ष जय बहादुर तामाङले बताउनुभएको छ । अन्य पालिकाबाट आउने टमाटरलाई केही समयका लागि रोकेर भएपछि किसानको उत्पादन बजार सम्म पु¥याउने तामाङले बताउनुभयो ।
यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । सोही टोलमा रहेको राधाजी कृषक समुह रहेको छ । सो समुहमा १८ घर रहेका छन् । सो समुहको मात्रै ८ विगाहाह क्षेत्रफलमा टमाटर खेती रहेको समुहका सचिव रंजित महतोले बताउनुभयो ।
पथरीशनिश्चरे ५ र ६ को अधिकाम्स भु भागमा नगदे तरकारीबाली पकेट क्षेत्र हो । कोरोना संक्रमणको कारणले लक डाउन भए पछि कृषकले बारिमा उत्पादन गरेको सब्जी कुहिन थालेको छ । उक्त सब्जी बजार सम्म पुर्याउन सक्ने बातावरण सृजना गरे कृषकहरुले उत्पादन गरेको बालि बारीमै कुहिने थिएन ।